प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण - वकिल को फ्रान्स !
प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण
तपाईं छौं बस समाप्त, आफ्नो पांडुलिपि । यो सामान्य छ कि तपाईं रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो पुस्तकहरू, सहित विरुद्धयहाँ तपाईं के गर्न आवश्यक थाह छ । यो प्रक्रिया बप्तिस्मा é, हामीलाई सक्षम गर्न मिति फाइल आफ्नो पांडुलिपि । डिजिटल हस्ताक्षर छ द्वारा लागि एक वर्ष हो । दुई विकल्प अवस्थित: र, र खोल्न छैन खाम रसिद छ । यो खुला हुनेछ मामला को सामने एक नोटरी वा एक न्यायाधीश छ । सानो टिप: छडी लेबल सिफारिश मा लट्केको वस्तु को खाम । लागत: को मूल्य मेल दर्ता । को आफ्नो काम, तपाईं, हुनेछ छ तपाईं साबित गर्न लेखिएको थियो, आफ्नो पांडुलिपि अघि. को उल्लेख कपीराइट छैन अनिवार्य रक्षा गर्न आफ्नो अधिकार, फ्रान्स मा काम स्वचालित रूपमा सुरक्षित छ । अभ्यास मा, यो छ राम्रो को भाग हुन आफ्नो पुस्तक विशेष गरी रूपमा, यो धेरै सरल छ: एक विशिष्ट आकार: जोगाउन एक साधारण विचार छ, यो आवश्यक छ कि यो विचार ढाँचा हुनुपर्छ मा एक सटीक तरिका हो । उदाहरणका लागि, हामी गर्न सक्छन् छैन रक्षा को विचार मा एक पुस्तक, को विषय"र फ्लोरा", कुनै पनि अन्य प्रकाशन मा यो विषय । यसको विपरीत को पूर्ण पाठ र विस्तृत मा एक पुस्तक र फ्लोरा सुरक्षित गरिनेछ. हुन मूल: खुसीको कुरा, लेखक छैन गर्न बाध्य आविष्कार नयाँ विषय वा वस्तु छ । यो व्यवहार गर्न कसरी छ भन्ने विषय गणनाहुन्छ. कोर्ट बोल्न को"छाप को व्यक्तित्व को लेखक", एक अवधारणा रहेको जो आत्मपुरक छ । साहित्य मा, यो अभिव्यक्ति हो र संरचना बनाउन को. नैतिक अधिकार अनुमति रक्षा गर्न आफ्नो काम विरुद्ध संशोधन सम्भव छ । उदाहरणका लागि, एक प्रकाशक इच्छा हुन सक्छ पुनर्लेखनरविस्तार गर्न भागमा पाठ भने लेखक विश्वास छ कि यी परिवर्तनहरू विकृत आत्मा को आफ्नो पांडुलिपि, उहाँले सक्छ इन्कार गर्छन् । नैतिक अधिकार गैर-हस्तांतरणीय फ्रान्सेली व्यवस्था छ । एक परिणाम रूपमा, एक प्रकाशन सम्झौता लागि प्रदान जो एक जिम्मेवारी नैतिक अधिकार वैध छैन । यदि तपाईं हस्ताक्षर गरेका छन् प्रकाशन अनुबंध लागि प्रदान जो यस्तो एक स्थानान्तरण पक्षमा आफ्नो सम्पादक, तपाईं अझै पनि गर्न सक्छन् यो इन्कार आफ्नो लेखहरू अनुमति बिना. प्रकाशक बनाउन सक्छ तपाईं आफ्नो नैतिक अधिकार र आफ्नो लिखित अनुसार यसको गतिविधिलाई । अभ्यास मा, केही प्रकाशक नहिचकिचाउनुहोस् गर्न कुनै व्याख्या लेखक गर्न यो छ कि आफ्नै लागि राम्रो कसरी लामो तपाईं फल सङ्कलन, आफ्नो काम छ । राम्रो समाचार: आफ्नो अधिकार को लागि पछिल्लो सक्छ आफ्नो सम्पूर्ण जीवन र पछि पनि."लेखक प्राप्त, आफ्नो जीवन समयमा, को अनन्य शोषण गर्न सही, आफ्नो काम कुनै पनि रूप मा र उठाउन एक मुनाफा मौद्रिक.
मृत्यु को लेखक, यो सही जारी को फाइदाको लागि आफ्नो, शासकका समयमा हालको पात्रो वर्ष र सत्तरी वर्ष पालन कि."किन यस्तो एक लामो अवधि छ । यो एक कहानी को ठूलो रुपैया छ । प्रकाशन समूह सुनिश्चित गर्न छ एक पेन्सन धेरै दशक लागि, जब एउटा लेखक भेट्छन् एक ठूलो सफलता र भए एक क्लासिक छ । अन्त मा यी सत्तरी वर्ष, काम मा आउछ सार्वजनिक डोमेन.
यो त खुलेर गरेर सबैलाई र शासकका को लेखक प्राप्त छैन अधिक प्रतिलिपि । यो ईयू व्यवस्था बढाएर प्रतिलिपि गर्न सत्तरी वर्ष द्वारा प्रेरित गरिएको छ कपीराइट अवधि विस्तार ऐन, एक व्यवस्था पारित मा द्वारा.एस. कांग्रेस । अमेरिकी व्यवस्था गरिएको थियो प्राप्त, समय मा एक बलियो समर्थन को भाग मा वल्ट डिज्नी कम्पनी, थियो जो गुमाउने को खतरा उनको अधिकार मिकी माउस चरित्र छ । यो किन कारण छ, केही कल विडम्बनाको यो ऐन 'मिकी माउस ऐन'. अब यो सम्भव छ यो सुरक्षा मार्फत सेवा प्रदायकको.
को सन्धि को
Ny kajy ny ankizy fanohanana ny Fianakaviana raharaha